Madaxweynihii hore ee Iran oo geeriyooday. |
Madaxweynihii hore ee Iran oo geeriyooday.
Madaxweynihii ugu horreeyey Iran ee kadib kacaankii Islaamiga ee 1979-ka Abolhassan Banisadr ayaa Sabtida maanta ah ku geeriyooday isbital ku yaalla magaalada Paris, isaga oo 88 jir ah.
Abolhassan Banisadr, ayaa tobaneeyo sano ahaa dibad-joog kadib markii uu baarlamanka dalkaas eryey.
“Kadib xanuun muddo fog, Abolhassan Banisadr waxa uu Sabtida ku geeriyooday isbitalka Pitié-Salpêtrière Hospital ee koonfurta bari Paris,” waxaa sidaas tiri IRNA, oo ah wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iran, oo soo xiganeysa ilo-wareedyo ku dhow madaxweynihii hore.
Qoyskiisa oo ku nool Faransiiska ayaa sidoo kale xaqiijiyey geeridiisa.
“Waxaan jecenlnahay inaan ku wargelino dadka sharafta leh ee Iran iyo kuwa u dhaqaaqa xoriyadda iyo madax-banaanida in…Abolhassan Banisadr uu geeriyooday…kadib muddo uu la xarbinayey xanuun,” ayey ku yiraahdeen war-saxaafadeed.
Qoyskiisa ayaa Banisadr ku amaanay inuu “difaacay xoriyadaha”.
Hase yeeshee Cadaaladda Iran ayaa Banisadr ku cambaareysay “inuu sanadahan dhan ku hoos jiray sirdoonka Faransiiska iyo Reer Galbeedka, islamarkaana uusan ka baaqsan inuu aflagaadeeyo shacabka iyo nidaamka Jamhuuriyadda Islaamiga ah.”
Banisadr ayaa ku guuleystay doorashadii ugu horreysay ee xor ah ee Iran ka dhacday 1980-kii, sanad kadib kacdoonka Islaamiga ah ee Iran.
Hase yeeshee waxaa 1981-kii eryey baarlamanka, kadib markii uu xumaaday xiriirka kala dhaxeeyey hoggaamiyihii sare ee hore ee Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini. Wixii markaas ka dambeeyey wuxuu si dibad joog ugu noolaa France.